Ijoyile yeJojoba ubuso
Ioli yeJojoba iyimveliso yendalo kunye neyodwa. Njengendlela yokwelapha kunye neyokucoca ioli yejojoba isetyenziswe ukususela kumaxesha amandulo - iisampula zeoli jojoba zafunyanwa kwiipiramidi zaseYiputa. Ukubunjwa kweoli echaziweyo kubandakanya izinto ezichaphazela kakuhle ulusu: zondla, zinyusa kwaye zinciphise. Ukongezelela, ioli echazweyo inepropati ene-antioxidant eqinile, leyo ibangela ukuba i-arhente esebenzayo. Eli liyile liphinde lisebenzise ukuhlaziywa kweeseli zesikhumba.
Ioli yeJojoba isuswa kwiintlobo zeSimmondsie chinensis (isityalo) ngendlela yokunyusa okubandayo. Isityalo apho ioli ekhutshwe khona ikhula kumazwe anesimo eshushu kwaye eshushu -California, eArizona, enyakatho yeMexico. Imveliso iluhlaza nge-golden tinge. Ioli ephantsi kwamaqondo okushisa, emva koko iyafana ne-wax, kwaye ekushiseni kwakhona iya kuba yinkomo. Umveliso ogqityiweyo awunamakha, ngoko ke usebenziseka kakhulu kwiimveliso zonyango ezijoliswe ekunyamekelweni kweengxowa zesikhumba ebusweni. Kwi-cosmetology yanamhlanje, i-jojoba i-petroli yinto eyaziwayo kakhulu kwizityalo ezahlukeneyo, ngenxa yokuba ithambisa, ikhuselekile, i-anti-inflammatory, i-moisturizing and regenerating properties.
Ngokwakheko lweoli, i-vitamin E ikhona kwisixa esikhulu, esilondoloza ubuhle nolutsha lolusu. Xa i-jojoba i-oyile isetyenziswa rhoqo, inkqubo yokuvuselelwa kweseli ikhawuleza, ngaloo ndlela iyancipha inkqubo yokuguga. Ngaphezu koko, isikhumba sombuso sikhatywayo kunye nezinto ezinomdla kunye nezondlo. Ioli echaziweyo inamandla okubuyisela isikhumba ngaphakathi ngaphakathi, kuba ingena kwiindawo ezifile ze-epidermis. Xa i-jojoba i-oyile isetyenziswa, ifilimu ekhuselekileyo yokhuseleko iyakhiwa kwesikhumba egcina umswakama kwaye ivimbela i-desiccation kunye nokukhwabanisa kwesikhumba.
Ngenxa yeepropati zayo, eli liyile lifana ne-spermaceti, esetyenziswa ngokubanzi ekuveliseni izicwangu zento yokucoca, i-lotions yokunyamekela kwesikhumba. I-Amino acid kunye neprotheni, efana neendawo eziphathekayo kwi-collagen, inoxanduva lokuxakaniseka, nangenxa yokunyaniseka kwesikhumba, kwaye inxalenye yeoli.
Ukusetyenziswa kweoli jojoba
Ioli echaziweyo ingasetyenziswe ngabo bonke, kuba ifanelekile kuzo zonke iindidi zesikhumba, nokuba zibuhlungu kunye neengxaki, zithinteka ukucaphukisa kunye nokubomvu kwesikhumba. kunye ne-elasticity. Ngempumelelo, nangenxa yezifo zesikhumba (psoriasis, dermatitis, acne ...) kunye nokungafezeki kwezityalo, njengoko kunempahla echasayo. Ngokusetyenziswa rhoqo kweoli, isikhumba sithobela ukubonakala okunempilo kunye nentshontsho, kwaye imibimbi iyahlanjululwa. Ioli yeJojoba yinto ehle kakhulu kwaye isebenzayo ekunyamekeleni indawo enesicatshuthi neyincinci ecaleni kwamehlo. Iyanceda kwaye inondle ulusu lwezinkophelo, lunceda phantsi kwamehlo ukugqithisa imibimbi kunye nokususa "inyawo zeenyawo" ezingenanto. Ukongezelela, ioli ihamba kakuhle. Ukongezelela, i-jojoba ioli inikezela isikhumba somzimba ukukhanya kwezempilo.
Ioli yeJojoba ingasetyenziselwa ukunakekelwa kwesikhumba, ingakumbi ngexesha lokukhulelwa kunye nexesha lokuhamba emva, njengoko kuthintela ukubonakala kwamanqaku atyulisiweyo kunye nokuphucula imeko yesikhumba. Kwaye ngenxa yeendawo zokuthobisa ioli, ingasetyenziswa emva kokucheba okanye ukushisa ilanga. Ioli iyanciphisa isikhumba seenduli, amadolo, izithende kunye neentende. Kunconywa ukuba uyisebenzise kubantu abanezinwele ezinobumba, obuthathaka nabonakaliswe.
Ioli yeJojoba ayinakuphikiswa, ukuphikisana okukodwa kukuphakamisa uveliseko kwizinto zeoli. I-Maslozoozha inesimo esiqine kakhulu, ngoko kwimo yaso ecocekileyo kuyinqweneleka ukuyisebenzisa kuphela kwimimandla encinci yesikhumba, umzekelo, isetyenziswe kwizibhokhwe okanye i-acne, kwi-scaly patches. Faka isicelo seoli jojoba kwiindawo ezijikeleze amehlo ngaphandle kokongezwa kwamanye amafutha. I-oyile isetyenziselwa imibimbi ngokuqhuba nokuhamba ngokuhamba ngeveki. Ioli yeJojoba njengekrimu enomdla kwendawo ephakathi kwamehlo ingasetyenziselwa imihla ngemihla, kodwa kufuneka idibaniswe namanye amafutha, umzekelo, ipereji, i-apricot, iidiliya, i-almond (isilinganiso 1: 2). Kwakhona, i-jojoba ioli kwifomu engatshintshiyo ingasetyenziselwa njengobuso buso. Imaski isetyenziselwa imizuzu engama-20 engaphezu kwesinye ngeveki.
Leoli iyakongezwa kwiitram, iimaski kunye nezinye izimonyo ezenziwe ngokulungelelaniswa naluphina uhlobo lolusu.
Ioli yeJojoba ingaba isiseko esihle se-fat for the preparation of creams ekhaya, ezingenakukholisa abo banqwenela ukwenza iimveliso zendalo kunye nezandla zabo, ngokukodwa i-jojoba ioli ikhulisa kakhulu impilo yabo.
Ukupheka kweemaski kunye nokusetyenziswa kweoli jojoba
Iimpawu ezinjalo zivame ukugcinwa kwemfihlo yeengqungquthela, ukuphucula umjikelezo wegazi, zineempawu ezinomsoco kunye nezondlo, ukukhawuleza ukuveliswa kwee-collagen fibers. Iimaski kunye neoli jojoba zisetyenziselwa kwisikhumba esikhotshiwe.
Imaski ngokumelene nemicu ejulile ihambelana nomnini waluphi na uhlobo lolusu. Ioli yeJojoba idibene neoli ye-avocado (isilinganiso 1: 1) kwaye isetyenziswe imizuzu engama-20 kwesikhumba ebusweni. Iingxowa zeemaski zisuswa ngepotton pad. I-mask efana neyokuthintela kufuneka yenziwe ngobusuku kabini ngeveki. Ukusetyenziswa kwansuku zonke kwemaski kuya kunceda ukufumana ukuvuselela.
Ukunakekelwa kwe-compacted (iinyawo, izibini, amadolo) okanye iindawo zesikhumba ezomileyo ze-jojoba oyile, kuvunyelwe ukuyisebenzisa ngendlela ecocekileyo, kwaye kunye kunye neoli zesitifiketi, umzekelo i-jojoba oil (50 ml) ixutywe kunye neoli ye-marmalade, i-lavender ne-geranium (5 itonsa nganye).
Umaski ukwandisa u-elasticity and elasticity of flabby kunye nesikhumba esingenalutho: ijojoba ioli (iipuniwe ezi-2) ixutywe neoli ye-chamomile, i-patchouli isandala.
Mask ukunciphisa ukonakala kunye nokwelula amanqaku: Kule meko, ioli kufuneka ixutywe, ingabonakali kwiindawo zengxaki zesikhumba. Ukongezelela, i-jojoba i-oil inokudibaniswa ne-lavender kunye neoli ye-oil okanye i-peppermint ioli-i-tablespoon ye-jojoba neoli e-2 nganye yeoli.
I-mask echasayo yokunciphisa i-acne: I-Jojoba ioli (i-tablespoon e-1) ixutywe kunye ne-2 ehlayo yeoli ye-lavender kunye namaconsi amathathu eoli yetiyi kwaye isetyenziswe kwilusu elichaphazelekayo. Ukuphucula imeko yesikhumba, kucetyiswa ukuba usebenzise imaski kabini ngosuku.
I-mask eshukumisayo neyondlayo: i-jojoba ioli (iipuniji ezi-2) ishushu kwaye ixutywe kunye neepunipoons ezi-2 ze-fat-cottage cheese ephezulu. Hlanganisa ngokupheleleyo izithako uze usebenzise unqamle ebusweni imizuzu eyi-10. Gcoba ngamanzi afudumele. Imaski kufuneka isetyenziswe kabini ngosuku.
Uluhlu lwebala lolunxwemeni (olulungele ubuso kunye nezandla) ngokuvuvukala, ukucubungula, ukuthukuthela: ijojoba ioli (iipuniwe ezi-2) ixutywe kunye namafutha abalulekileyo e-sandalwood, i-chamomile kunye ne-orange (enye yehla nganye).
Indlela yokunyamekela ubuso bakho kusasa nangokuhlwa
I-Pasta ene-blue sauce
Ukwenziwa kwe-Hollywood: I-TOP-3 izithandabuzo zobuhle ezivela kwi-cinema
Ukuncelisa impilo yengane yomntwana
Iipancakes ngee-anyanisi ezihlaza
Iimpawu zonyango kunye nemilingo yeeparele
Umsila omnyama kunye ne-tofu netamatates